Akekho ubudlelwano akuzona ngaphandle izingxabano, izimpi, inhlamba ... Kubalulekile ukuthi lezi isimo akaphendukanga ukudabula. Kodwa uma kwenzeka lokhu, njengoba ukubuya intandokazi umuntu? Kungakhathaliseki ukuzama ukuze sicele intethelelo yakhe, njalo ukubukela naye endlini ngaso, zama ukuchaza ukuthi kungani wenza kanjalo noma kunjalo?
Indlela ukubuyisela umfana? Le ntombazane kubalulekile ukuba azinqumele ngokwakhe - nokuthi ufuna ukubuyela? Ngaphambi kokunikeza iseluleko, ake sibone, noma yindoda ukuzama ukuyibuyisa? ngokushesha abantu eziningi ziphendula ngokuthi akukho Kufanele ucabange ngakho, futhi lokhu uthando zokuphila kwakho, uma ungakwazi ukuphila ngaphandle kwakhe? Kodwa ngokuvamile e zikhathi imizwelo yakho ukukhuluma. Kungcono ukuzama ukuhlola isimo soberly, ngokucacile futhi ucabangisise uzindla lokuthi konke ungenzele okuhle? Ngemva ukuxabana zinenjongo, okungukuthi ukuxabana iba isici juqu ebuhlotsheni bakho. Uma namanje abalwa minuses ezingaphezu kuka pluses eninabo emshadweni wenu, kungcono ukubeka leli phuzu. Ngemva kokuhlanganiswa livamile abantu bajabule, kodwa eshubisa isimo esinzima kakade kuphela. Cabanga indlela abuyise othandekayo ukuze abaphonse uqobo - futhi akuyona inketho. Ubuwula phela lobu nokubhubhisa uyingane. Kungcono ngoba kakade ngokuqondile akekho ngeke.
Kanjani ukubuyela kothandekayo. Amathiphu ambalwa
Kanjani ukubuyela? Lover emuva kulula. Yena ngokwakhe kanzima kulokho baxabana. Kodwa uma akazange enze izinyathelo kuqala, futhi lobo bungane, zinkulu ngokwanele, futhi ukuxabana ecasulayo noma icala wabenza ingxabano, bese ukunikeza izindlela ezimbalwa ezingasiza ukuze uphendule lo mbuzo: "? Indlela ubuyisele ozithandayo noma intandokazi"
zokusebenza kwengqondo eziningi, futhi umqondo wakho ezifana ngakho, okuhlanganisa, aseluleke ukuba kwehle uvalo. Awukwazi ukubona imizwelo yethu ukuqala ukuba athathe isinyathelo. Wena ubuhlungu, kwakubuhlungu ... Indlela engcono kakhulu uqale - kokubili ukuzola. Kungenjalo, wena engozini ukwenza amaphutha kakhulu, lokho-ke kuyoba sorry. Uzithathele, isikhathi sakho, nika izinsukwana ukucabanga, ngihlaziye kabusha isimo futhi. Uhlangane nabangani, phumani ikhanda lami umsebenzi, ngokuvamile, benza konke abangakwenza ukuze inciphise isikhathi khulula, musa ayeke ukucabanga nje mayelana nendlela ukubuyela kothandekayo. Phila ahlukahlukene.
Ukuzinakekela kanye nokubukeka kwabo. Zama ukubheka okuhle. Nokuhamba ubuhle salon, ukuyothenga, ukuzivocavoca ku okuhle club - Sebenzisa yini eyokusiza likhanga futhi beqiniseka.
Ngokuhamba kwesikhathi une ukuxhumana nabantu obathandayo. Zama uzigcine uhlangothi, musa ukuwela eqile "oh, yeka ukuthi lihle kanjani ngaphandle kwakho" ukuze "Angikwazi ukuphila ngaphandle kwakho." Noma ikuphi ukuhlupheka emphakathini nobudlova. Omunye akufanele bachitha abantu phakathi kwemininingwane yezimpilo zabo, hhayi ukuthi abeke-ke. Into engcono kakhulu lapho intuthuko yakho bazomtshela abangane bakho. Futhi iqiniso lokuthi unesithakazelo une abangane mutual - ngamaphesenti ayikhulu! Uma uqonda ukuthi lokuxhumana lomuntu siqu ngeke ukwazi ukubhekana nemizwa yabo siqu, khona uqhubekela encwadini. I-SMS noma i-imeyili, futhi kungaba izincwadi ngesandla - noma yini oyithandayo. Lapho ungabuyela bale ndlela yokukhulumisana ukubuyela emuva, ubhale lokho ungathandi noma kwakubonakala nokhahlo futhi udelela.
Kodwa uma, naphezu isiphakamiso sakho mayelana sihlangane, indoda yakho ayiphumelelanga, babe nokuziqhenya, musa bagcizelele futhi ningahoxi! Indlela ephumelela kakhulu - ngisho ukuyeka contact isikhashana. Musa ukuhlangana, ningabizi, ungazami ukubamba iso. Konke lokhu owenziwa ukuze kuzuze bona. Musa bagone umcamelo sikhale ebusuku, azame ukugcina bahlole futhi bejabule futhi ungavumeli umuntu acabange ukuthi ngaphandle-ke babulawa. Ngemva kwesikhathi esithile ungaqala ukukhulumisana futhi, kodwa sicela musa isu ngesikhathi imizwa yothando, umphathe kabi njengoba naye njengomngane. Khumbula ukuthi uma indoda yakho uthanda kini: Uzakubezwela masinyane ngasekho uzophendula noma omuhle ku sipho sakho, noma uzimisela yabo resumption of ubudlelwane.
Intambo Phakamisa - okusha Igama Plastic Surgery
Kungani ama-ovari aphuka ngesikhathi sokuya esikhathini?
Ukopha ebuchosheni: izimpawu, ukwelashwa, imiphumela futhi Izibikezelo
Lokho igqoke nge amateki ukubheka wemfashini?
Qibla Direction: uwuchaza kanjani? Kaaba Engcwele eMecca
Brucellosis kubantu: Izimpawu kanye Ukwelashwa
Iphone 4 ukukubuza? KweManyuwali nezindlela firmware
Yokutakula emgogodleni: umzimba
Lapho DHT liphakeme e abesifazane futhi amadoda?